बलिउडले धान्न नसक्ने भनेका महेश बाबुले किन फेरे २४ घण्टा नपुग्दै बोली ? – Annapurna Post News
May 12, 2022 sujaLeaveaComment on बलिउडले धान्न नसक्ने भनेका महेश बाबुले किन फेरे २४ घण्टा नपुग्दै बोली ?
काठमाडौं। महेश बाबु, दक्षिण भारतीय फिल्म क्षेत्रमा ह्यान्डसम हंककारुपमा परिचित छन्।
‘प्रिन्स अफ टलिवुड’ भनिने महेश बाबु अहिलेसम्म खासै ठुलो विवादमा त परेका छैनन्। तर उनी हिन्दी सिनेमाका बिषयमा बोलि रहन्छन्, र सानो तिनो चर्चा भइरहन्छ। उनी आफुले हिन्दीमा सिनेमा नबाउने, हिन्दी फिल्ममा काम पनि नगर्ने यसअघि पनि बताउदै आएका थिए।
यसले केहि आलोचना भएपनि त्यत्ति ठुलो रुप लिँदैन थियो। तर हालै उनले हिन्दी सिनेमा (बलिउड)का बिषयमा दिएको एक अभिव्यक्तीले भने भारतीय सिनेमा क्षेत्रमा विवाद र हंगामा खडा गरेको छ। त्यहि अभिव्यक्तीले २४ घण्टा नपुग्दै उनलाई यु–टर्न हुन बाध्य पारेको छ।
हालै उनले हैदराबादमा अदिवी शेषको एक्सन ड्रामा फिल्म ‘मेजर’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा बलिउड बारे सनसनि टिप्पणी गरेका थिए। उनले आफुले बलिउडमा कदम नराख्नुको कारण खुलाउँदै भनेका थिए ’मलाई बलिउडले धान्न सक्दैन।’ त्यसपछि उनको सर्मथन र आलोचना हुन थाल्यो।
केहिले समर्थन गरेपनि केहिले उनलाई घमण्डीको संज्ञा दिइरहेका छन्। तर उनले आफ्नो बयानको २४ घण्टामै यु–टर्न लिनु पर्ने अवस्था आयो। भरतीय सञ्चार माध्यामले लेखेअनुसार उनको एक स्रोतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महेशले आफूले सिनेमालाई माया गर्ने र सबै भाषाहरूलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्।
बलिउडका बिषयमा गरिएको टिप्पणी केवल मजाक भएको र यसलाई मजाकको रूपमा मात्रै लिनु पर्ने उनले बताएका छन्। आफूले काम गरिरहेको चलचित्रमा सहज महसुस गरिरहेको र तेलुगु सिनेमा तिब्र गतिमा बढ्दै गएकाले आफ्नो सपना साकार भएको देख्दा खुसी भएको भन्दै उनले बचाउ गरेको अमरउजालाले लेखेको छ।
महेश बाबुको अभिव्यक्तीमा दक्षिण क्षेत्रीय फिल्म समिक्षक रमेश बालाले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले महेशको बचाउ गरेका छन्। रमेश बालाकाअनुसार महेश बाबुले बलिउडलाई सानो र कम आँकेका छैनन्।